Nhoroondo Kambani-Shenzhen SH-MBR Technology Co., Ltd
Shenzhen Shuihuan-MBR Co. Ltd inogadzira michina yekuchenesa mvura yeMBR. Isu tinopa yakasanganiswa MBR yekurasa tsvina michina ine PVDF mhango fiber membrane zviyero, ayo anoshandiswa zvakanyanya kurapa maindasitiri uye matunhu emakanzura, zvakaita sewewage kubva kuzvipatara, mahotera, misha, mataundi, nzvimbo dzekudzidzisa, nzvimbo dzinoyevedza zvichingodaro.
Shenzhen SH-MBR Co. Ltd iri muShenzhen, guta razvino uno muChina. Tine mafekitori maviri ekugadzira iyo MBR yakasanganiswa yemidziyo yekurapa yemvura uye isina mhango fiber membrane ma module. Imwe fekitori iri iripo in Liaoning dunhu uye imwe iri Dunhu reJiangxi. Isu tine anopfuura makore gumi nematanhatu 'ruzivo muMBR kurapwa kwemvura yakasviba. We inopa kurapwa kweseweji, kuisirwa, kubvunza, kuvimbisa, kuyedza uye kugadzirisa kuona kuramba kuchitevedza.
Tiri kutsvaga boka rekunze kwekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye indasitiri yekurapa mvura yakasviba vanhu vakakurumbira mukudyidzana kwakabatana. Isu tinopa yakazara seti yezvigadzirwa tekinoroji rutsigiro, kugadzirwa, mushandirapamwe, uye pamwe chete kuvaka chigadziko chekugadzira.